सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतमा भ्रमको खेती गर्नेलाई प्रहरीले कडा कारबाही गर्ने
चैत ३०, २०७४ BNNTV
काठमाडौं, ३० चैत । सामाजिक संजालमाहरुमा साविकको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लेटरप्याड, पूर्व मन्त्रीको नाम र हस्ताक्षरसहित फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरु नेपाल सरकारले आगामी नयाँ वर्ष २०७५ देख पूर्णरुपमा बन्द गर्न लागेको भनी फैलाईएको गलत र भ्रामक समाचारप्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अहिले खासगरी फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ यस्ता झुठा र भ्रामक खबरहरु पोष्ट गरी भ्रम फैलाउने काम भैरहेको छ । यस गलत हल्लाको विषयमा मन्त्रालयले एक्सन लिने समेत बताएको छ। मन्त्रालयले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्णय नगरिएको र त्यस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिउपर कानूनी कारवाही गरिने समेत प्रष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ, ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई यस विषयमा छानविन गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ। अब त्यस्ता गलत सन्देश प्रवाह गर्नेउपर कडा कारवाही गरिनेछ।’
साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्यस्तो गलत, भ्रामक सूचनामा विश्वास कसैले पनि नगर्न र आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताबाट त्यस्ता गलत सूचना पोष्ट गरेको भए हटाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत ३०, २०७४१४:३०
जुत्ताको तलुवामा लुकाएको तीन केजी सुनसहित दुई भारतीय नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ !
कागेश्वरीमा बिहानैदेखि लाखौँ भक्तजनको भीड
यसकारण पाएन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता, पोखरेललाई रक्षा, थापालाई गृह!
महिलालाई हातपात गरेको भन्दै स्थानीयले कुट्दा एकको मृत्यु !
“हामी प्रतिपक्षले नसके पनि सत्ता पक्ष आफैले सरकार ढाल्छन्” – कांग्रेस नेता पाण्डे
“पुनःनिर्माण प्राधिकरण घामजुन रहेसम्मका लागि स्थापना गरिएको होइन “